Ikhaya/Izifundo ze-AulaGEO/Ikhosi-Imodeli yeSketchup
I-AulaGEO iveza ikhosi yokumodela ye-3D ngeSketchup, sisixhobo sokuqonda zonke iifom zokwakha ezikhoyo kuloo ndawo. Ngapha koko, ezi zinto kunye neemilo zinokuthi zifakwe kwi-georeferenced kwaye zibekwe kuGoogle Earth.
Kule khosi, baya kuba nakho ukufunda iziseko zomzobo kunye nemodeli ye-3D yendlu eya kwenziwa ukusuka ekuqaleni kwiinkcukacha. Emva kokugqiba imodeli, uya kuba nakho ukufikelela kwisifundo esikhawulezileyo kwi-V-Ray, ukugqiba ukunikezelwa kwangaphandle kwendlu kwiV-ray kuya kwenziwa.
Iinkcukacha zemodeli ye3D
Iikhosi-3D Modeling Iikhosi zesketchup